China BASEBALL MEDALS ifektri nabakhiqizi | Kingtai
Ukunqoba umqhudelwano wesanti kufanelwe umklomelo ophezulu. Ukukhetha kwethu izindondo ze-baseball kuyindlela enhle yokugubha leyo migijimo yasekhaya! Kukhona izitayela eziningi namasayizi, into efanelana nanoma yikuphi ukunambitheka kanye nesabelomali. Indondo ngayinye kulula ukuyenza ngendlela oyifisayo ngokukhethwa okukhulu kwamaribhoni anamathiselwe ongakhetha kuwo, futhi, ngokuqoshwa okungeziwe, komuntu siqu ngemuva! Njengenjwayelo, izindondo zethu ziza nokuthunyelwa okusheshayo okuqinisekisiwe kanye nokwaneliseka kwamakhasimende okungu-100%.
Izindondo zethu ze-baseball ziqinisekile ukuthi zizodlalwa ngabadlali bakho! Amabhande entamo AMAHHALA nenqwaba yezinketho. Siyabahlula esiqhudelana nabo, futhi unokuzethemba okwengeziwe kokubhekana nomkhiqizi wemiklomelo onezinkulungwane zamakhasimende anelisekile! Thenga ukukhethwa kwethu okukhulu kwezindondo ze-Baseball ngezansi, futhi ubuke izaphulelo zethu zenani lendondo ye-baseball ngokukhetha indondo ngezansi! Sizame konke okusemandleni ethu ukunikeza ukukhetha okuhle kwezindondo ze-baseball zekhwalithi kanye nezinye izindondo ze-baseball ezikhethiwe ngokwezifiso. Ngethemba ukuthi uzovuma ukuthi ukukhetha kwethu indondo ye-baseball kuyikhwalithi ephezulu, futhi kuhlukile ngokwanele ukwenza imiklomelo yakho ibukeke njengomdlalo wasekhaya. Futhi siphethe ukukhetha okuhle kwe-Baseball Trophies nama-Plaque.
I-baseball isibuyile futhi sinezindondo ze-baseball nezindondo zokuthi ukhumbule i-epic (uma ibambezelekile) isizini ka-2020. Khetha phakathi kwamapuleti ethu asekhaya kanye nendondo yethu edume kakhulu, indebe yamagilavu ​​e-baseball. Kutholakala ngosayizi abaningi abahlukene, izitayela nemibala, sinokuthile kwaso sonke isitayela nesabelomali, futhi kunjalo, ukuqoshwa kwamahhala nokungenamkhawulo! Yenza kube ngokwakho indebe yakho ye-baseball namuhla futhi wonge ngamanani ethu aphansi nezaphulelo zenani!
Okwedlule: IZIndondo ZOKUQWASHISA
Olandelayo: Izindondo zeBasketball